अर्थमन्त्रीभन्दा केही कुरामा म आफै विद्वान छुः बामदेव गौतम – Clickmandu
अर्थमन्त्रीभन्दा केही कुरामा म आफै विद्वान छुः बामदेव गौतम
क्लिकमान्डु २०७६ मंसिर २१ गते १५:२८ मा प्रकाशित
यो उपनिर्वाचनमा समग्रमा हामीले सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ तर परिणामबाट हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन । हामीले विगतमा जितेकामध्ये महत्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन सकेनौँ । भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाएका छौँ । विगतमा हामीले गठनबन्धन गरेर चौतर्फीरुपमा विजय हासिल गरेको चितवन जिल्ला, जहाँ हाम्रो पार्टीका एक अध्यक्षको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ गुमाएका छौँ । अर्घाखाँची र दाङमा पनि केही स्थान गुमेका छन् । पार्टीको यही मङ्सिर १८ गतेको सचिवालय बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ, त्यो प्राप्त भएपछि मङ्सिर २३ गतेका लागि तय भएको बैठकमा यसबारे छलफल शुरु हुनेछ । सरकारसहित हामी निर्वाचनमा जाँदासमेत पहिला जितेका स्थानहरु गुम्न पुगेका छन् । हामीले त्यो स्थानलाई जोगाउँदै नयाँ ठाउँमा पहुँच स्थापित गर्न सक्नुपर्नेमा त्यो सकेनौँ । नसक्नुले हामी सरकार र पार्टी काममा लोकप्रियताको कसीमा खाँटी हुन सकेको देखिँदैन । त्यसकारण निर्मम भएर समीक्षा गर्दा सरकार र पार्टीले जनभावनाअनुसार राम्रो काम नगरेको प्रस्ट देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा थप स्थान गुमाउनुपर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो सङ्गठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ‘ग्रासरुट’ त हाम्रो तलै छ । जहाँ, जोजो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीँ छन् । कमिटीमा मात्रै नभएको हो मान्छे त त्यहीँ छन् । मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारले मत दिएका हुन् । त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन । आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौँ ? यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ । समीक्षामा जाँदा अरू कुरा पनि आउन सक्लान् । कतिपय ठाउँमा अन्तरघात पनि देखापरेको छ । अन्तरघात भएकै छैन भन्ने होइन । खासगरी धरान उपमहानरपालिकामा यस्तो देखिएको छ । त्यहाँ मतदातामा जे जे कुरामा असन्तुष्टि थियो, त्यो कुरा आगामी दिनमा सच्याउन सक्छौँ भनेर भन्न सकिएन । स्थानीय तहले जनतामा बढी कर लगाएको भनेर मत कम आएको भनिएको छ । त्यो बढी कर पार्टीले लगाएको होइन, नगरपालिकाले लगाएको हो । यस्ता विषयमा एकीकृत पार्टी कमिटी समयमा कायम नहुँदा समयमा समीक्षा हुन पाएन तर नयाँ प्रमुख आएर ती कर एकाएक फिर्ता लिने वा नेकपाका अरू जनप्रतिनिधिको सहयोगबिना घटाउने भन्ने पनि हुँदैन । यी कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन । सरकारको लोकप्रियता जनतामा छैन वा सरकार आलोचनात्मक अवस्थामा छ भनिएको बेलामा समेत हामीले फेरि अधिकांश स्थानमा त जितेका छौँ । सरकारले कामै नगरेको भन्ने होइन । जस्तो सङ्घीय संरचनालाई खडा गर्नु यो सरकारको मुख्य उपलब्धि हो । कुरा यति हो कि तत्कालीन र जनतामा देखिने प्रकारका कतिपय काम गर्न सकिएन । विकास बजेटमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा दिनुपर्ने भएकाले पनि केन्द्र सरकारको काम कम देखिएको हो । पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि गरेर रु तीन हजार बनाइएको छ । यो वृद्धि सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै गरिएको भए एक प्रकारको सुधार राम्रो हुन्थ्यो । बजेट र नीति, कार्यक्रम बनाउँदा ख्याल गर्न नसक्दा केही कमजोरी भएका छन् । यी सबै कुरामा हामीले आलोचनात्मकरुपमा जनतामा जान सकेनौँ । यसबीचमा नेकपाका पक्षमा रहेको जनमतलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस पनि भयो । यस्तो स्थितिमा पनि हामीले धेरै स्थानमा त जितेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा, उपनिर्वाचनमा हामीले रोइहाल्नुपर्ने वा लौन भूकम्पै गयो, वा केके भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन । जनताको सहानुभूति हामीसँगै छ तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ । यस अवस्थामा लोकप्रियताको कसीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र जनताले जे चाहन्छन्, त्यो गर्ने गर्नुपर्छ ।
मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । यसमा उहाँले मूल्याङ्कन गरेरै गर्नुभएको होला । कुनै पनि मन्त्रीलाई असफल भनेर कारवाही गरेर हटाउनुभएको छैन । कतिपय राम्रा काम गरिरहेकालाई पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ, नयाँ व्यक्तिहरु ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भनेर विभिन्न बैठकमा भन्नुभएको थियो । जे होस्, यो पुनः गठनमा मेरो खास टिप्पणी छैन । वर्तमान राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्री प्रणाली भएकाले कुनै मन्त्रीले काम गरे वा गरेनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा समग्रमा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र सरकारलाई गति दिने काम र दायित्व उहाँको हो । जस र उपजस उहाँकै जिम्मेवारीमा पर्छ । प्रधानमन्त्री दृष्टिकोण र सोचका आधारमा हामीले हेर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न यस्तो यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेको समयमा पार्टीले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अब नभ्याएर होला । सरकारको योजना पार्टीको कमिटीमा लगेर छलफल गरेर बाहिर ल्याउनु हुँदैन । योजना आयोग छ, संरचना छ, कहाँ पार्टीमा लगेर छलफल गर्ने भन्ने लागेर पनि होला । सरकारको नीतिगत समस्या र कार्यशैलीका बारेमा त मैले पहिला पनि लेखेर दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मैले जे जे कुरा सङ्केत गरेको थिएँ, त्यही देखिएको छ । तीव्र गतिमा काम गर्न सकिनथ्यो ।
देखिने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन । सरकारले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विवाद पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ, खासमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
यो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टीले सरकार चलाउने होइन । सरकार प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो तर सरकारले पार्टीलाई पृष्ठभागमा राखेर परामर्श र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसो भए पार्टीले होइन रहेछ सरकार चलाउने ? नीति, कार्यक्रममा नै पार्टीमा छलफल नभएपछि ? सरकारले पार्टी चलाउनै पाउँदैन । चलाउन खोजेर पनि चल्दैन । हाम्रो सिस्टमभित्र पार्टीले सरकार चलाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउने भनेको सहयोग गर्ने भन्ने हो । राम्रो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने हुँदैन, संसदीय व्यवस्थामा । चीनको जस्तो प्रणालीमा त्यो हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीका तर्फबाट जसलाई पठाइएको छ, उसैले सरकार चलाउँछ । ऊ नै पूर्णरुपमा जवाफदेही हुन्छ । यहाँ पार्टी जवाफदेही हुँदैन । यद्यपि, सरकारले राम्रो काम गरेन भने पार्टीले पनि मार खानुपर्छ ।
हुनुपर्छ भनेर नै हामीले गरेको हो । अब हेर्न बाँकी नै छ । तपार्इं पार्टीको सङ्गठन विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । तपाईंको विभागले अहिले के काम गरिरहेको छ ? – अहिले सङ्गठन विभागले केही काम गरेको छैन । विभागको एउटा अनौपचारिक र एउटा औपचारिक बैठक बसेर हामीले पार्टीको नियवमालीमा विभागलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा के पायौं भने देशभरबाट आएका सूचना अभिलेखमा राख्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव दिनेबाहेक केही अधिकार छैन । त्यसो भएर बृहत् कार्ययोजना बनाएर तीन महिनामा आठ लाख पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्ने र अर्को तीन महिनामा पार्टी सदस्य सबैलाई पार्टीको सङ्गठन र कमिटीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य बनाएका छौँ । त्यसपछि पार्टी स्कूल विभागसँग मिलेर हरेक तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर अहिलेका दस्तावेज, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्तमा दुरुस्त राख्ने खालका कार्ययोजना लागू गर्न हामीलाई सचिवालयले अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । अधिकार नआईकन हाम्रो खास काम छैन ।
पुगेन भन्नेभन्दा पनि कामै भएन भन्ने हो । काम त दिनुप¥यो नि त । अधिकार दिनुप¥यो । मैले दिएको योजनाअनुसार काम शुरु भएको छ महिनामा सफल भइनेछ । जुन दिन अधिकार प्रत्योजन हुन्छ, त्यो दिनदेखि ६ महिनामा सबै काम सक्छु र पार्टी स्कूल विभागसँग मिलेर आठ लाख पार्टी सदस्यलाई प्रशिक्षण गराएर हामीले अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रम बुझाउँछौँ ।
के फरक प¥यो त । वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न ? मैले खोजेकै हो । म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो । २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो, मलाई । विसं २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ । अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपार्इं नै हो, तपाईं नै लाग्नुस् । उहाँहरुले नै भनेको हो । चुनावमा गइयो, हारियो ।
तपार्इंलाई धोका भयो उसो भए ?
के धोका हुनु । चुनावमा गइयो, हारियो । जितेको भए बनाउँथे होला त ? –त्यो त सांसद्ले बनाउने हो । पार्टीले निर्णय गर्नुपर्दैन र ? – पार्टीमा म कुनै कमजोर छैन । पार्टीमा कमजोर भएको भएदेखि मलाई यहाँबाट धोतीटोपी समाप्त गरेर देश निकाला गरिसक्ने थिए । त्यस भएर म अहिले पनि नेकपाको अपरिहार्य व्यक्ति हुँ । म हुनै पर्छ, यो पार्टीमा । उहाँहरुले मलाई बनाउनुहुन्थ्यो वा हुनथ्यो । त्यो उहाँको कुरा हो ।
उहाँहरु (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड)ले के सोच्नुभएको छ । उहाँहरुलाई नै थाहा होला । मिडियामा अनेक अनेक कुरा आएका छन् । तर त्यस्तो होइन । त्यो सम्भावना छ ? –मेरो लाग्यो, पुग्यो भने वा केही गरी म फेरि निर्वाचनमा गएर जितेर म प्रधानमन्त्री भएर आए भने सबभन्दा पहिले मैले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गराउँछु । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको त्यो भिन्नता किन ? एउटा माथिल्लो र अर्काे तल्लो गरी जुन व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधनबाट समाप्त गर्नेछु । राष्ट्रियसभाबाट उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउँछन् तर प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । राष्ट्रियसभाले निर्णय ग¥यो तर तलकोले उल्टाइदिन्छ । तलको निर्णय ग¥यो माथिल्लोले उल्टाइदिन्छ । यस्तो हुनु हुन्न ।
सरकारले बनाउने कृषि कार्यक्रममा हाम्रो किसान महासङ्घलाई कहिल्यै नै आमन्त्रण गरिएन । हाम्रा विचार कहिल्यै नै सुनिएन । सुझाव पनि मागिएन । यसपटक पनि मागिएन । पहिलो पटक किसान महासङ्घ जन्माउँदा खेरी जमीन जमिनदारीसँग थियो । त्यो खोसेर किसानलाई बाँड्ने काम भयो । दोस्रो पटक वितरण गरिएको जमीनलाई व्यावसायिकीकरण चक्लाबन्दीमा लैजानुपर्छ भनियो । यसपटक अब सम्पूर्ण कृषिभूमिमाथि राज्यको स्वामित्व हुुनुपर्छ । यो किसानको माग हो । कसरी हुन्छ त, भन्दा राज्यले सबै कृषि भूमि किन्नुपर्छ । जबसम्म तपाईंले कृषिभूमि राज्यको मातहतमा ल्याउनुहुन्न तबसम्म आत्मनिर्भर हुने कुरा हुनै सक्दैन किनभने अहिले हाम्रो देशमा ३१ लाख हेक्टर मात्र कृषिभूमि छ । यसका टुक्रा टुक्रा गरेर तीन करोड टुक्रा छ । टुक्रा जग्गामा खेती हुन्छ ? त्यहाँ त कोदालो चलाउँछुभन्दा नि पुग्दैन । हातले खोस्रेर खेती गर्नुपर्ने स्थिति छ । जबसम्म सम्पूर्ण जमीनको टुक्राटुक्रा समाप्त गरेर चक्लाबन्दी गरिँदैन । तबसम्म मेशिन प्रयोग गर्न सकिँदैन । जबसम्म मेशिन, मलबीउ प्रयोग पोषणयुक्त खाना बिरुवा दिन पाइँदैन । तबसम्म हामीले कुनै पनि संसारको कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनाँै । अब सरकारले सबै जमीन खरिद गर्नुपर्छ । किनकि अब जमिनदारी होइन सबै किसानको जग्गा छ । त्यो जग्गा सुन जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सरकारले हाम्रो ३१ लाख हेक्टर जमीन ३०० देखि चारसय खर्बमा किन्न सक्छ । तीन÷चार सय खर्ब नेपाली रुपैयाँको सम्पत्तिका रुपमा हाम्रा जनतासँग रहेको छ । तर त्यो निस्क्रिय पूँजी रहेको छ । त्यो निस्क्रिय पूँजीलाई सक्रिय बनाउन सरकारले जमानी लिएर किन्नुप¥यो । सरकार किनेर आएको ३÷४ सय अर्बलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुप¥यो । जसको जमीन हो, यसलाई चाहिँदा बैंककाटे सुनिश्चिता दिनुप¥यो । अहिले हामीसँग ३०० अर्ब रुपैयाँ छ भने हामी गरिब हुँदैनौँ । हामी गरिबी छैनौँ । यसलाई बुद्धि पु¥याएर हाम्रो जमीन जनताको सम्पत्ति हो । जनताले रगत बगाएकोबाट किनेको सम्पत्ति हो । यो कसैबाट बिर्ता पाएको छैन । गुठीमा केही सम्पत्ति छ, त्यो देउताको नाममा रहेको छ । त्यो माटोमा रहेको सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाएर पैसामा परिणत गर्दछौँ । कोही विदेशीले दिन्नमा भने पनि फरक पर्दैैन । हामीलाई वर्षका २० बिलियन डलर चाहिन्छ । त्यो पैसा व्यवस्थापन गर्न म सक्षम रहेको छु । मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि उपजको अत्यधिक आयात भइरहेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ । हामीले हाम्रो देशमा उत्पाकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ३१ लाख हेक्टर जग्गालाई ३ करोड टुक्रामा बाँडेर हुँदैन । त्यसलाई चक्लाबन्दी गएर पैसामा परिणत गरिसकेपछि देख्नुहोस् कि यहाँ जति अहिले हामी बाहिरबाट जति कृषिजन्य पदार्थ किन्छौँ । त्योभन्दा बढी हामीले यही उत्पादन गरेर खान मात्र पुग्ने होइन कि बाहिर पनि निर्यात गर्दछौँ । दुर्भाग्य हो कि भाग्य हो । हरेक नयाँ विचारहरु र नयाँ मान्यता एवं सिद्धान्तका रुपमा यसरी चल्नैपर्छ भन्ने मैले भन्दै आएको छु तर ममाथि नै प्रहार हुन्छ । यो नेपाली जनतासँग ३०० बिलियन डलर पैसा छभन्दा धेरै पत्याउँदैनन् । पैसामा परिणत गर्ने मेरो विचार हो । सरकारले कतिको ग्रहण गर्नुहुन्छ थाहा छैन । तैपनि उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । विचार त वामदेवकै राम्रो । तर लागू हुन्न र पो ।
तपाईँ अघि सार्नुभएका यस्ता सकारात्मक कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले लागू गरेको देखिएन त ?
फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ, भारतले अक्रिमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा देखिएको समस्या कसरी समाधान होला ? – सचिवालय बैठकले तुरुन्तै भूमिसुधार मन्त्रीलाई कुन कुन पक्षसँग सहयोग लिएर हुन्छ, हाम्रो नयाँ नक्सा हाम्रो भूमि एक इन्च पनि बाहिर नपारेर नक्सा तयार गरेर वितरण गर्न भनेको छौं । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष र महासचिवले कसरी गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो भूमि अतिक्रमण गरेर नचाहिँदो खिचलोको काम बन्द गर्नुप¥यो र हाम्रो भूभाग हामीले नै सार्वभौम लागू गर्दछौँ भनेर भन्नका निम्ति हाम्रा साथीभाइ जानुहुन्छ ।
विशेषदूत पनि पठाउने कुरा छ के हो ? प्रधानमन्त्रीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेषदूत तोक्नुभएको छ । सभामुख रिक्तताबारे छलफल भएको छ कि छैन ? – अहिले छलफल भएको छैन । संसद्को अधिवेशन बैठक बोलाउनुअघि सभामुखको चयन हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीको विद्धतामाथि बामदेवले प्रश्न उठाए, भने- खतिवडाको नीतिले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्यो
कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै ताहाचलको कार्यालयमा श्रम स्वीकृति सेवा बन्द